Meridio inotishamisa neshangu nyowani uye tambo dzemavara | Ndinobva mac
Imwe nguva yapfuura takaona muSoy de Mac akateedzana emabhanhire kubva kuItaly femu Meridio, chimwe chezvinhu zvavo zviri zvinhu zvavanoshandisa kugadzira mabhandi aya uye imwe ndeyekuti iwo zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko, zvinoshanda nemaoko, izvo zvinotivimbisa rakanyanyisa mhando basa pane izvi tambo dzeApple Watch.
Kuva nemukana wekuchinja leash patinenge tichida uye zvinoenderana nebasa ratinofanira kuita rakakosha kune vazhinji, Meridio inotipa yakasarudzika uye inoshamisa muunganidzwa wemamodeli saka zvine chokwadi chekuti unozopedzisira wawana iyo yaunonyanya kufarira kana inokodzera chiitiko chako.
Mazuva mashoma apfuura takaona matatu maMeridio mhando: iyo Nappa muvara Slate Brown, iyo Suede muvara Taupewood uye iyo Vintage muvara Husiku hweArctic. Nhasi isu tine mukana wekuyedza iyo mivara mitsva yakatangwa nekambani iyi, iyo Meridio Green Guerilla uye neBlue Combact, miviri mitsva yakafukidzwa.
1 Ose ari maviri anowira mukati meSuede renji
2 Green Guerilla neBlue Combact
3 Image Garari
Ose ari maviri anowira mukati meSuede renji
Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ivo vari zvakapfava-bata tambo tamboIvo vanopa kukwana kwakakwana uye kwechokwadi kupokana kushandisa pane chero chiitiko. Tinogona kutaura kuti ivo vanokodzera vese varume nevakadzi. Mune ino kesi, sezvo iri ganda repamutemo, rinofanira kutakurwa mundangariro kuti pakutanga ivo vanofanirwa kuchinjika pachiuno, kana vachinge vaita, vanotaridzika chaizvo uye vanorasikirwa neukukutu hwekutanga hwavanogona kuve nahwo.
Iyo Suede renji ikozvino ndiyo imwe yeaya ane mavara akasiyana kwazvo uye ini ndinogona kutaura kuti iwo ndiwo andinofarira zvakanyanya, sezvo vaine kubata kwazvino uye vakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro. Sezvo nemamwe mamodheru eMeridio iyi, saizi tambo es chete ye42mm Apple Watch.
Green Guerilla neBlue Combact
Iyo femu inoramba ichiwedzera mamodheru matsva kune yayo hombe katarogu yemabhande uye mune ino kesi matambo ese ane iwo akafanana kupedzisa, asi iwo mavara avo anochinja. Nekuti iyo Meridio Green Guerilla, iyo yepasi ruvara iri girini uye yeBlue Combact, bhuruu. Muzviitiko zvese izvi isu tine maitiro akafukidzwa kunyangwe ichokwadi kuti ivo havana kunyanyo "garish" zvachose, vanoenda vasingazivikanwe kunyangwe ivo vakanaka chaizvo uye voita kuti vanhu vakubvunze kwaunotora.
Meridio Green Guerilla neBlue Combact tambo
Anopedza uye akashandisa zvinhu
Ganda chairo rinopedzisa
Dhizaina chimwe chinhu chisina kujairika mune aya maviri mamodheru
Rigid pakutanga kwekushandisa (chimwe chinhu chakajairika paganda)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Meridio anotikatyamadza netambo nyowani dzematehwe uye mimic color
Kira, Mac inoenderana neyemakanika keyboard inomirira yako mari
Tim Cook naDonald Trump, vachasangana zvakare nhasi kuWhite House